Kooxda Celta Vigo oo taako ugu dhigtay Barcelona garoonka Abanca Balaidos … +SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 27 Juun 2020. Kooxda Celta Vigo ayaa taako u dhigtay Barcelona, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Abanca Balaidos, kaasoo ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hogaamineysay kooxda Barcelona.
Daqiiqadii 20-aad kooxda Barcelona ayaa hogaanka u qabatay dheesha, waxaana 0-1 ka dhigay Luis Suarez, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Lionel Messi.
Daqiiqadii 50-aad Celta Vigo ayaa heshay goolka bar-bardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Fedor Smolov, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Okay Yokuslu.
Laakiin daqiiqadii 67-aad Barcelona ayaa markale hogaanka u qabatay dheesha, waxaana markale 1-2 ka dhigay Luis Suarez, waxaana markale ka caawiyay Lionel Messi.
Balse sheeko waxay is badeshay kaddib markii ay Celta Vigo dhalisay goolka bar-bardhaca daqiiqadii 88-aad waxaana dheesha garba siman oo 2-2 ah ka dhigay Iago Aspas oo dhaaliyay laad xur ah ee aad u qurux badan.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay bar-bardhac 2-2 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Celta Vigo iyo Barcelona, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Abanca Balaidos.